Ogaden News Agency (ONA) – Hay’ada qoxootiga S.ogadenia ee dalka Yemen -Sana’a oo ka qaybgalay siminaaro iyo tababaro xagga Hogaaminta (leadership).
Hay’ada qoxootiga S.ogadenia ee dalka Yemen -Sana’a oo ka qaybgalay siminaaro iyo tababaro xagga Hogaaminta (leadership).
Laga soo bilaabo bishii November dhexdeedii waxaa soconayay siminaaro ay ka qayb galayeen gudiga qoxootiga S.Ogadenya iyo xubnaha jaaliyada ee Yemen -Sana’an oo ku saabsanaa maamulka iyo hogaaminta, waxaana lagu gudoonsiiyay xubnihii ka qayb qaatay tababaradaas shahaadooyin. Waxaa iska kaashday tabbaradan fulintooda Hay’adaha lashaqeeya UNHCR iyo Hay’ada qoxootiga Ogadenia.
Gudiga qoxootiga S.ogadenia ayaa waxay qaybiyeen bayaan ay kaga warbixinayeen dhibaatooyinka iyo tacadiyada loogaysto shacbiga S.Ogadenya ee birimagayda ah, tacadiyadaas oo tii ugu dambaysay ay ahayd shirkii baroor ceebeed ee Jigjiga 27/28/11/2012.
Waxaa kaloo jiray tababar loo qabtay gudiga qoxootiga oo ay soo qabanqaabisay Hay’ada Save the children, tababarkaasoo ay bixinayeen xubno ka socday Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta Sare ee dalka Yemen. Waxaa tababarkaas lagaga hadlayay sidii loo ilaalin lahaa caruurta wax ka barata dugsiyada iyo kuwa aan dhiganin sidii loo siin lahaa fursad ay wax ku bartaan.
Tababaradaas kadib waxaa lagu soo xidhay hawlihii iyo nashaadaadkii ay wadeen hay’aduhu xaflad dhaqameed aad u qiima badan oo ay maal galinaysay Hay’da INTERSOSS, oy isku soo duba rideen Gudiga Qoxootiga S.Ogadenya iyo maamulka jaaliyada oo iskaashanaya. Waxaa xaflada lagu qabtay Hall-ka Wasaarada Thaqaafada ee Yemen, waxaana lagu soo bandhiagay hidihii iyo dhaqankii S.Ogadenya oo ay soo diyaariyeen KOOXDA fanka ee HORSEED waxayna ku soo gaba-gabawday jawi aad u wanaagsan.